Mareykanka oo duqeyn ka gaystay gudaha Soomaaliya markii ugu horeysay muddo lix bilood ah. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Mareykanka oo duqeyn ka gaystay gudaha Soomaaliya markii ugu horeysay muddo lix...
Mareykanka oo duqeyn ka gaystay gudaha Soomaaliya markii ugu horeysay muddo lix bilood ah.
Mareykanka ayaa markii ugu horreysay muddo lix bilood ah weerar duqeyn ah ka geystay Soomaaliya, taas oo uu ku bartilmaameedsaday Al-shabaab, waxaana duqeyntay ay aheyd mid uu ku caawiyay ciidamada kumaandoosta Soomaaliya oo weerarro kala kulmayay Al-shabaab.
Saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan sababta duqeyntan loo oggolaaday ama in Taliska Mareykanka ee Afrika uu bilaabi doono inuu sameeyo olole aad u xooggan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya, sida kuwa Mareykanka uu Soomaaliya ka geystay sanadihii la soo dhaafay.
Next articleMaxaa dhaliyay Khilaafka u dhaxeeya Taliyaha Ciidanka Xoogga & kan AMISOM?